site ha na 16-02-26
Chengdu ga-wuru nke scrap edu ndú-acid batrị maka electric ịnyịnya ígwè imegharị ihe maka iji usoro
site ha na 14-12-18
"Economic Ozi Daily" mmekorita si Chengdu City Environmental Protection Bureau, iji melite imegharị ihe maka iji netwọk, melite imegharị ihe maka iji ụlọ ọrụ na ụdị nile nke ebe, nke mere na mmetọ na-ebelata ka a kacha nta, Chengdu ga-oruru nke n'efu edu ndú-acid batteri .. .
Zhengzhou ọma nchoputa nke ụfọdụ agadi skuuta
Ebe ọ bụ na December 15, Zhengzhou uwe ojii ngalaba na-eme nchọpụta imebi nke agadi skuuta n'okporo ụzọ maka oge mbụ na ichoputa ma wetara a nwa oge nkwusioru nke ụgbọala ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ a mma, na-akwọ ga-enyocha ọzọ na njide ntaramahụhụ. Ụtụtụ, na wa ...
Road Iwu maka Agagharị Scooters
Iji nọgide na-arụsi ọrụ ike na onwe ha ndụ, ụfọdụ ndị nwere nkwarụ na ndị agadi na-adabere na agagharị scooters iji nweta gburugburu. E nwere ọnụ ọgụgụ nke iwu gafee mba dị iche iche meworonụ banyere chịkọtara scooters. Ọ dị mkpa iburu n'uche nke ebe iwu na ụkpụrụ re ...
Gịnị bụ ọdịiche dị n'etiti ihe Electric Oche ọlụsị & a Agagharị skuuta?
N'ihi na nke mkpụrụ ndụ ihe nketa okwu, mmerụ ahụ ma ọ ịka nká, ndị mmadụ mgbe ụfọdụ abaghị agagharị na-adabere na wheeled ngwaọrụ nweta gburugburu. Ndị a ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ịhọrọ ihe electric oche nkwagharị na a agagharị skuta. Ma ndị a na ngwaọrụ ga-a onye ebe ọ chọrọ ịga ọtụtụ mgbe, ma ...
Ònye na-kasị mkpa omenala ụgbọ ala na-emepụta BMW electric ụgbọ ala pụta on top
Na-adịbeghị anya, e nwere mgbasa ozi ga na-ekwu na ahịa na ire nke ọtụtụ electric ụgbọala, bụ ihe ọ bụla karịrị nanị izute California efu-anwuru iwu (na 1990s, iwu na-achọ ka onye ọ bụla efu-emission ugbo ala na-emepụta ọtụtụ puku emepụta ere ca ...
10 Secret bụrụ Uru ihe Electric Bike
Nke a ndepụta na-adịghị na-ebipụta na n'ihu page n'ihi na a otutu nke ọdịnaya akụkọ a na-na nzuzo. Anyị bụ ndị na-agba ịnyịnya ngwa ngwa electric anyịnya igwe nwere ya mma, na adịchaghị chọrọ ka mmadụ niile mata otú ihe ọma anyị nwetara ya. Anyị na-enwe na-akpali akpali bụ nke na-aga downhill ọbụna mgbe n'elu flat ...